Mid ka mid ah wax ka badan oo caan ah oo aad samayn kartaa ka dib Raadka waa in la abuuro logo ah kartoon aad, ama macaamiishaada, ganacsiga. Its isha qaadaan, la doonayo iyo hab fiican inuu soo jiito macaamiisha, si aynu fiirino waxa ku lug leh.
Shaqadeena ugu horeysay waxay kor u taagaysa naga mashruuca diyaar u animation, si off hore abuuraya ka kooban isticmaalaya Curiska> New inay ka shaqeeyaan. Waxaan isticmaali xallinta yar web of 320 x 240 goob ujeedadaas.
Hadda waxa aannu leenahay qaab dhismeedka, waxaan u baahannahay wax lagu dhiso, si dambe aan la abuuro lakabka adag for our Logo adigoo isticmaalaya Layers> New> adag, doorashada midab ah oo ku habboon in ay waafaqayaan ka kooban. Waxaan isticmaali # 000000 taas oo Black labada.
Hadda waxa aannu leenahay asal aynu u abuuri naga logo. Hadda halkan waxaad ku dari kartaa in pre-diyaar ah logo, farshaxanka ama wax kasta oo ay ka shaqeeyaan, ay u fududaato waxaan aadayo in ay isticmaalaan qoraal wax fudud sida aan logo si ay u muujiyaan farsamada.
Sidaas, waxaan hadda waxaan ku soo dhex noqdo lakabka> New> Text iyo abuuro lakabka qoraalka aan. Dheellitir size qoraalka iyo midabka sidaas waxa loo arki karaa si cad oo aan la samayn.
Hadda waxa aannu leenahay Logo, sida ay tahay, waxaan bilaabi karaan in ay dantooda ay u abuuraan animation. Haddii aad u baahan tahay in aad logo in la si fiican u xuddun, ama shey kasta oo kale oo dhab ahaantii, oggayn anfacaya waa in la isticmaalo xirneeyn si loo hubiyo in wax walba waa la qumman yahay meesha aad rabto, waxa aad heli kartaa in la isticmaalo badhanka in guddi ka kooban sida hoos ku qoran .
Waan ku faraxsanahay halkaan qoraalka waa for this mid ka mid ahay, laakiin waa shay muhiim ah in la ogaado oo ku saabsan aan loo eegayn waxa aad samaynayso.
3. Ku darista saamaynta
Waayo, isku daygii ugu horreeyay ee animation aynu doonayno inaynu u isticmaali dhibaatooyinka soo dhisay lafteeda ku soo galaan ka dib Raadka, taasi waa ay ka fog sida ugu sahlan oo aad ku qaar ka mid ah natiijada cajiib ah. Taas daraaddeed mid, waxaan muujiyo lakabka adag in guddi Timeline ah, ka dibna dooran noo saameyn. Waxaad mari kartaa Saamaynta> Jilidda> CC World walxaha si ay u helaan in mid ka mid ah aan halkan la isticmaalayo, ama si fudud u tagaan si ay saameynta iyo presets guddi oo Midigta iyo jiidi hawlgeli CC walxaha World rogtid oo aad lakabka adag. Si kasta oo aad u tago, natiijada kama dambaysta ah waa tan.
Kontaroolada ayaa saamayn ku xaq waa kuwo dhamaystiran, iyo ciyaaro ku wareegsan oo iyaga la jira waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah natiijada oo xiiso leh, runtii way bixiyaan si ay u tijaabiyaan marka la isku dayayo noocyada kala duwan ee mashaariic cusub oo keliya si ay u fahmaan waxa suurto gal ah. Inkastoo halkan waxaan ku eegaynaa saameynta istuuray walxaha World tusaale ahaan, waxaad isku dayi kartaa kuwa kale si loo arko haddii aad jeceshahay saamaynta. Halkan waxaan beddelo cuf in .200 sida waxa ay taasi qayb ka ah toogan dhinaca shaashada yar oo dheeraad ah oo aan door bidayaa saamaynta, iyo kulan midabka walxaha la qoraalka.
4. Helitaanka Amarka saxda ah
Tallaabada xigta waa mid fudud laakiin xusid mudan. Marka aad isku deyeyso nooc kasta oo animation, waxaad ka heli waa caado qabo layers aad si sax ah, waayo, taasu oo dhan in ay ka shaqeeyaan.
Halkan waxaan hore u abuuray naga lakabka adag, iyo qoraalka ku fadhiya sare. Taas macnaheedu waxa weeye wax kasta oo saameyn in lagu dabaqo lakabka adag dhici hoose qoraalka, codsiyada qaarkood laga yaabo in waxa aad rabto, halkan, waxaan rabnaa in aan animation si ay u gudbo qoraalka ah ee saamaynta aan dooneyno, oo sidaas ayaan Switch layers agagaarka. Tani waa sida ugu fudud ee jiidayeen lakabka qoraalka hoose lakabka adag in guddi waqtiga.
Had iyo jeer ka fiirso wixii waa in la geeyo meesha ugu sareysa ee waxa in mashruuca la soo jeediyay, haddii uu dhiirogelin logo ah, iyadoo la isticmaalayo maaskaro ama farsamo kale oo dib Dhibaatooyinka Sawirashada waxa wax si ku tago, waa mid ka mid ah xirfadaha aad u horumariyaan jidka.
5. Dejinta Animation ah
Sida waxyaalaha ugu wada in dib markii Raadka, keyframes waa aasaaska animation taas, oo aan xakameeyo animation ee saamayn walxaha iyada oo ay goob heerka dhalmada, ka helay iyadoo ku balaarineysa goobaha in guddi waqtiga lakabka adag sida aan halkan ka arki kartaa,
Riixayo icon stopwatch ku abuuraa keyframe ah, oo waxaan doonayaa in aan abuuro 4 halkan, in tusaale ahaan this laba ilbiriqsi marka laga reebo laakiin ay u isticmaalaan si joogto ah waqtiga u badan tahay in uu doonayo in uu xoogaa gaaban noqon, cidina ma doonayso in ay eegaan logo ah 12 seconds si aad u aragto waxa uu samaynayo ka dib oo dhan, saamaynta waa in si degdeg ah.
Sida aan la abuuro keyframe kasta waxaan qabsato beerta Rate Dhalashada, laga bilaabo hooseeyo 1, ka dibna u socday oo 70 at keyframe labaad, iyo 120 ee saddexaad, ka dibna isku xigta 5 labaad ee keyframe finalka oo la dhigay 0, ku fikrad isagoo qayb ka ah in si tartiib tartiib ah dhimin daaha qoraalka logo waxaa hoos ku qoran.
A Mudanayaasha mid aad u fudud, shaki kuma jiro, laakiin ay u shaqayso iyo sida aad ka arki karto waa u fududahay in ay soo hooyaan.
6. La shaqaynta dulinka Graphics
Inkastoo saamaynta fiican iyo mid fudud waa aasaasiga ah, haddii aad galaangal u leeyihiin files logo .Ai ama muuqaallo kale dulinka aad sidoo kale isku dayi kartaa this mid ka mid ah. Files Kuwani waxa loo abuuray in adobe muujiye, iyo waxa ku jira macluumaad lakabka in ay oggolaadaan in ka dib markii Raadka inay isku dubaridi qaybaha kala duwan shaqsi ahaan. Barashada si ay u isticmaalaan .Ai files si wax ku ool tahay talaabo muhiim ah in ay ogaadeen suurtagalka ah ka dib Raadka.
Marka hore iska soo dhoofsadaan aad graphic dulinka galay ka dib Raadka, tani waa mid fudud sida jiidayeen faylka gal guddi mashruuca kuwaas oo kor u soo Bixiyaa wax wada hadal ah oo ka soo dejinta. Waxaa muhiim ah in uu doorto 'ka kooban hayn layers' doorasho, taas oo keenta in halabuurka cusub lakabyada kala duwan ee image oo dhan soo bandhigay aad u.
Waxaad ku dari kartaa dhaqdhaqaaq, saamaynta iyo wixii la mid ah kuwaas aad kari karto wax kasta oo kale in dib markii Raadka, in tusaale ahaan this Kaliya waxaan ku dari doonaa wareeg ah si ay u muujiyaan.
Sida aan horay u aragnay, animation daba noqonayaa keyframes, oo halkan kama duwana.
Waxaan si fudud guji stopwatch soo socda si ay doorasho warejin labada lakabka casriga ah iyo lakabka hoosku ah, guuraan, xilliga ay ku, qabsato wareeg ah ee shay kasta si uu qiimuhu isku mid, dhaqaaqo oo ku celi sida aan horay u aragnay.
Waxaan isticmaali 4 keyframes in dhamaadka si loo abuuro saamayn wareegi fiican. Waxaad dabcan wuxuu isu karaa iyada oo animation hore oo ay leeyihiin logo fur ka muuqda buufiyo walxaha, ama wax kasta oo kale oo ka mid ah saamaynta in laga helo barnaamijka. Anigu ma ku adkaysato kara oo ku filan sida ay muhiim kaliya qayb ka ah tijaabo u noqon kartaa in ay ogaadeen habab cusub oo ay u isticmaalaan qalab aan ku siiyo.
Waxaan rajaynayaa in tani ay idin siiyey qaar ka mid ah fikrado animations fudud aad ku dari kartaa in logos, horyaal iyo wixii la mid ah mashaariicda aad, waxaa hubaal ah waa wax aad u siin karaa waqti dheeraad ah oo cajiib ah ilaa iyo haatan, laakiin waxaan oo dhan meel bilowdo.
Video Software Samaynta u Mavericks, Waxaad samaysataa Video ku OS X Mavericks
> Resource > Video > Sida loo sameeyo ah Logo dhaceen in ka dib Raadka